Mugabe says Zanu PF will have to elect his wife; he will not appoint her - The Zimbabwe Mail
HomeHeadlinesMugabe says Zanu PF will have to elect his wife; he will not appoint her
Mugabe says Zanu PF will have to elect his wife; he will not appoint her
September 10, 2017 Staff Reporter Headlines, Politics 0
“I met the Masvingo provincial leadership after [Tourism minister Walter] Mzembi was sent by the provincial MPs who called for the axing of [late Provincial Affairs minister] Shuvai Mahofa and Josaya Hungwe,” Mugabe said.
Majonga suffered serious injuries and is now wheelchair-bound. Mugabe said Mnangagwa had prepared his own 85-page dossier against Moyo but requested for more time before he presents it to the Zanu PF politburo because he was not well.